Siyaasiyiin iyo xildhibaano ka cararay Muqdisho oo shir ku qabsaday magaalada Nairobi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Siyaasiyiin iyo xildhibaano ka cararay Muqdisho oo shir ku qabsaday magaalada Nairobi
Shir ay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ku yeesheen qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada ka jira dalka Soomaaliya, xildhibaano iyo musharaxiin isu soo taagay xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya ee 2016-ka ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho uga soo carareen kadib markii laga hor-istaagay inay ku shiraan hoteelada halkaasi ku yaala.
Waxaa shirkaasi Nairobi ka dhex muuqday xubno ay ka mid yihiin xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil, Musharax Cali Xaaji Warsame, Kamaal Guulaatee, Musharaxad Canab Maxamed Diiriye iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan siyaasiyiinta xisbiyada dalka, waxayna dhamaan shirkaasi uga hadleen xaaladda uu haatan dalka Soomaaliya maraayo.
Xubnahaasi ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay diidan tahay inay shirarkooda ku qabsadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Waxay sidoo kale ku eedeeyeen dowladda inay ciidamada nabad-sugidda ee loo yaqaano NISA u adeegsatay goobihii ay ku shiri lahaayeen ee magaalada Muqdisho, taasna ay keentay inay usoo cararaan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
Dhinaca kale, waxay xubnahaasi shirka Nairobi ku yeeshay sheegeen in guddiga doorashada dalka Soomaaliya ee sanadkaan 2016-ka ay yihiin guddi aan madax bannaaneyn, islamarkaana ku baaqay in is-bedel buuxo lagu sameeyo guddiga.
Ugu dambeyntii, siyaasyintaas iyo xubnaha shirkaas ku qeyb galeysay ayaa ku dhawaaqay madal la magac baxday (Madasha Muwaadinka Isbadal Doonka Ah), iyagoona sidoo kale ku baaqay hannaanka doorashadda u dhaceeyso inay noqoto mid xalaal ah oo leh hufnaan iyo kalsooni.